DIIWAAN Grumman S2F-3 Tracker FSX & P3D Xidhmada - Rikoooo
Grumman S2F-3 Tracker FSX & P3D Xidhmada
downloads 17 905
Milton Shupe - Eagle Rotorcraft mataliddu
Updated on 17 / 03 / 2019 : Hada la jaan qaadaya Prepar3D v4, Rakibaha v10.5
Markii hore waxaa loo sameeyay FS2004 oo uu qoray Milton Shupe, tan FSX Grumman S2F-3 waa FSX casriyeynta asalka ah ee asalka ah. The FSX S2F-3 si buuxda ayuu u leeyahay FSX/P3D iswaafaqsan oo ka faa'iideysanaysa dhowr FSX- astaamo u gaar ah, oo ay ku jiraan garaaca iyo khariidaynta muruqyada ..
The Grumman S-2 Tracker (oo hore loogu magac daray S2F) wuxuu ahaa diyaaraddii ugu horreysay ee loogu talagalay dagaalka lagula dagaallamayo burcad-badeedda (ASW) si loogu adeego Ciidamada Badda Mareykanka. Afhayeenkii hore ee AF-2 wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee loogu talagalay dagaalka lagula jiro burcad-badeednimada, laakiin waxa uu isticmaalay laba nooc, qalab lagu ogaanayo iyo hub kale oo hub.
S-2 joogo ee foomka of a mataanaha-engine, garabka sare elongations xoog. Waxaa ku qalabeysan yahay marsho degtey bishkleetiga, laba propellers Wright Duufaan R-1820 hawlgala propellers saddex-wada dagan.
Is-hoosaadka, khariidada boomaha, iyo khariidadaha qaaska ah
FSX animations gaar ah
2 liveries - orday oo USN
DirectX 10 socon
Author: Milton Shupe - Eagle Rotorcraft mataliddu
Grumman C1-Ganacsade FSX& P3D